Los Andes EcoLodge Cabins - I-Airbnb
Los Andes EcoLodge Cabins
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguFabricio Y Fernanda
Wamkelekile kwiKhabhinethi yethu. Imi kwindawo emangalisayo, emazantsi eeNtaba zeAndes, indawo evuselela uxolo nokuphumla. Yindlu enkulu ye-150 m2, ixhotyiswe kakuhle kakhulu, kwaye inomhlaba ozele zizityalo kunye nemithi yeziqhamo yazo zonke iintlobo ... ngaphakathi kwekhabhinethi eyinkimbinkimbi kuluntu olunefilosofi yendalo, ukucamngca kunye nobomi bomoya, apho iZen iintsapho kuhlangana, kwezenkolo, kunye Sufis. Iimbono zoluhlu lweentaba zintle kakhulu.
Endlwaneni wethu zonke iinkonzo, amanzi ashushu, iitawuli nezinto washcloths, ingubo, izinto eziluncedo, microwave, nokuba liziko lezonka, izibane zegesi, pfumerile ngaphandle (kwiindawo), umatshini ikofu, ifriji isikhenkcezisi, satellite TV, izitya kunye nempahla nekhitshi ngokupheleleyo, WiFi Internet, itafile kunye nezitulo ngaphandle, njl.
Sifumaneka kwi-Uco Valley 7km ukusuka eLa Consulta kunye ne-15Km ukusuka eTunuyán, i-100Km ukusuka kwiSixeko saseMendoza. "ICamino del vino" Ingqongwe ziivenkile zewayini apho iiwayini zezobugcisa ezikumgangatho wamazwe ngamazwe zenziwa. Iikhilomitha ezimbalwa kukho ukuhla kumlambo waseTunuyan, okanye ukuphuma entabeni. Unokuziqhelanisa nokuhamba ngebhayisekile, ukuhambahamba, ukukhwela intaba, ukutya ukutya kwasekhaya, ukungcamla iiwayini ezikwinqanaba eliphezulu, okanye uchithe usuku ebaleni kumazantsi eeNtaba zeAndes.
Umbuki zindwendwe ngu- Fabricio Y Fernanda
Thina ziyafumaneka unomphelo undwendwe, ukuba uqhagamshelane nathi nge mobile phone okanye email, ukuba isicelo iimenyu ukutya zendalo ekhaya, excursions, utyelelo iiwayini Boutique, ehamba kunye ukunyuka uhambo, unyango Spa, iiseshoni ukucamngca, njalo njalo. Siyi-300mt ukusuka kwi-complex kwaye sinokusombulula nayiphi na imfuno yeendwendwe ngokukhawuleza.
Thina ziyafumaneka unomphelo undwendwe, ukuba uqhagamshelane nathi nge mobile phone okanye email, ukuba isicelo iimenyu ukutya zendalo ekhaya, excursions, utyelelo iiwayini Boutiqu…